Fahasalamana - pejy fandokoana ho an'ny ankizy maimaim-poana
Sakafo mamy ho an'ny ankizy
Ny ankizy dia tia zava-mamy. Azo antoka toy ny amena tany am-piangonana. Ary tsy toy ny taloha, toa nahazo fidirana amin'ireo vatomamy kely na aiza na aiza izy ireo.
Avelao ny ankizy hihinana zava-mamy?
Naschen mamy - Sary avy amin'i Beth Thomas amin'ny pixel
Manomboka amin'ny haavon'ny mason'ny ankizy ao amin'ny toeram-pivarotana supermarket izany ary mitohy amin'ny lanonana fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy miaraka amin'ny mofomamy sôkôla, puffs crème ary smarties.
Na dia ankehitriny aza isika rehetra dia nodiovina momba izay ataon'ny siramamy be loatra amin'ny vatana, ny hatavezina dia olana iray amin'ny taranakay izay mitohy amin'ny an'ny zanatsika.
Tsy noho ny fientanam-po no nampiakarana ny feo fa ho faty aloha kokoa ny taranaka zanaky ny akaninjaza ankehitriny noho ny an'ny ray aman-dreniny noho ny tsy fahampian-tsakafo.
Ary ity amin'ny fotoana iray, etsy an-danin'izany, olona an-tapitrisany no mosarena sy maty mosary noho ny tsy fanjarian-tsakafo. "Sakafo mamy ho an'ny ankizy" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy fahasalamana sy sakafo mahavelonaKeywords fahasalamana, nibble, Mamy, zava-mamy, Sugar amin'ny sakafo, Votoatin'ny siramamyLeave a Comment mikotrika vatomamy ho an'ny ankizy